Xukuumadda Somaliland oo shaacisay inay dalka ka saarayso 786 ruux oo qaxoonti ah | Berberanews.com
Home WARARKA Xukuumadda Somaliland oo shaacisay inay dalka ka saarayso 786 ruux oo qaxoonti...
Xukuumadda Somaliland oo shaacisay inay dalka ka saarayso 786 ruux oo qaxoonti ah
Hargeysa-(Berberanews)- Xukuumadda Somaliland, ayaa markii ugu horreysay caddaysay inay dalka ka saarayso toddoba boqol iyo sideed iyo lixdan qaxoontiyadda oo iyagu dalbaday in dib loogu celiyo dalkooda Itoobiya.
Wasiirka wasaaradda Dib-u-dejinta Somaliland Md Cabdirisaaq Cali Cismaan, ayaa sida ka sheegay fadhigii maanta ee golaha guurtida oo xog-waranka ka siineyey waxqadabadka wasaaradda dib-u-dejinta Somaliland.
Wasiirka oo arrimaha ka hadlay waxa uu yidhi; “Wasaaraddu waxay fulisay qorsheyaal dib loogu celinayo dadka qaxoontiga ah ee ku sugan Somaliland.Iyadda oo dalka aynu deriska nahay ee Itoobiya dib loogu celiyo qaxoonti dhan toddoba boqol iyo sideed iyo lixdan ruux oo iyagu dalbaday inay dalkooda dib ugu noqdaan.”ayuu yidhi wasiirka wasaaradda dib-u-dejinta Somaliland Md Cabdirisaaq Cali Cismaan.
Wasiirku waxaa uu inta raaciyey hadalkiisii “ Halka sida oo kalena ay dadka reer Somalilan ahi dib ugu soo noqdeen waddamad Liibiya iyo Yemen, xiliyaddii ay rabashaduhu ka aloosnayeen waddamadda.Taasi oo kor u soo qaaday in dalku aan qaadi karin baaxda inta le’eeg, maadaama oo ay dalka ku soo guryo noqdeen dadkii dhalasho ahaan lahaa.”
Arrinta ayaa ku soo beegantay xil ay xukuumadda qorsheysay inay dalka ka saartayo qaxoonti dalka ku jooga magangaliyo.
Previous articleMudanayaasha Golaha Guurtida Somaliland oo warbixin ka dhegaystay Wasiirka wasaaradda dib-u-dejinta
Next articleWasiir ka tirsanaa dawladii Rayaale oo ka waramay duruufaha siyaasadeed ee kala Irdheeyey Madaxweyne Silaanyo Iyo Maxamed Xaashi iyo kala duwanaanshaha hogaamineed ee Dr. Gaboose Iyo Cirro